Iinkonzo zeNkxaso-Iziko lezeLwimi eziBini
Ikhaya IsiNgesi sababaleki, ii-asylees, i-SIV, kunye namaxhoba okurhweba ngabantu ngokungekho mthethweniIinkonzo zeNkxaso
Njengomntu omtsha apha eMelika, ukufunda isiNgesi kunokukunceda ukuba ukunxibelelane nekhaya lakho elitsha kunye noluntu lwakho olutsha. Injongo yethu kwi-BEI kukukunceda ufezekise iphupha lakho laseMelika kwaye woyise nayiphi na imiqobo ngokunika esinye sezixhobo ezinamandla kakhulu - unxibelelwano. Sifundisa ngesiNgesi osifunayo kubahlali nomsebenzi. Ukuba umbono wokuthatha iklasi yesiNgesi ubonakala ungafikeleleki, jonga iinkonzo zenkxaso esizinikezela ukukunceda ufezekise iinjongo zakho.
Ukufumana ingqesho kunokukufaka uxinzelelo, ngakumbi xa umtsha eMelika. Umcebisi wethu wabafundi ulapha ukukunceda nokukunceda ugqibezele amanyathelo wokuphumeza ikhondo lakho lomsebenzi. Ngamanye amaxesha oku kuthetha ukuqhubeka nobomi bakho obude apha e-US. Ngamanye amaxesha, kuthetha ukufumana injongo yomsebenzi omtsha. Iinkonzo zethu zokuCebisa ngeNkqubela phambili zinokunceda ekuboneni amathuba oqeqesho, ukuqhubeka nokubhala, iiklasi zolwimi lwesiNgesi, iiklasi zezakhono zomsebenzi, kunye nokunye!
Inguqulelo / Utoliko
I-BEI ibonelela ngononophelo lwabantwana ngexesha leklasi, ukuze uMama noTata baqhubeke nokufunda isiNgesi ngelixa abantwana bekhathalelwa.
I-BEI ingaba ndingumboneleli wakho weelwimi, kodwa ubusazi ukuba singakunceda ufumane ezinye izixhobo ekuhlaleni? Njengomfundi kwi-BEI, uyinxalenye yenethiwekhi enkulu yenkxaso. Sukuthandabuza ukusibuza imibuzo. Singakudlulisela kwabanye ababoneleli beenkonzo zeMbaleki ukuze baxhaswe ingqesho, iimfuno zezindlu, amalungiselelo e-GED, njl njl .Siphuhlise iminyaka yenethiwekhi yoluntu. Qiniseka ukuba udibana noMcebisi wabafundi we-BEI ukuze ufunde ngakumbi.
Sonke singabafundi beelwimi kwaye siyayazi ukuba kunjani ukuba ngumfundi wokuqala. Ngamaxesha xa ifuneka, abasebenzi bethu abahlukeneyo kunye nefakhalthi banokukunceda kulwimi lwakho lwenkobe. Sinenkxaso yolwimi kwisiArabhu, isiTshayina, isiFarsi, isiFrentshi, isiHindi, isiJamani, isiGujarati, isiJapan, isiKazakh, isiKinyarwanda, isiKirundi, isiKorea, isiKurdish, isiPhuthukezi, isiPhuthukezi, isiRomania, isiRashiya, iSerbo-Croatia, isiPedi, iSpanish, isiSwahili, Tagalog , IsiTurkey, isiUrdu, isiVietnam kunye neYoruba.
Xa ufudukela kwisixeko esitsha, ngamanye amaxesha kuthatha ixesha ukufunda izitalato kunye nokufumana ithuba lokuhlola. Ngenxa yoku, sinikezela uninzi lweeklasi zethu kufutshane nekhaya lakho, kwindawo ekulula ukuhamba kuyo. Ukuba ukhululekile ngothutho lukawonkewonke, unokukwazi ukuthatha iklasi kwikhampasi yethu. Iithokheni zebhasi ziyafumaneka ukuze abafundi beze kwi-BEI, njengoko kufuneka.
Ukufaka isicelo sobumi base-US?
I-BEI inceda ekuthumeleni abathengi abafanelekileyo kwizifundo zasimahla zase-US zobuhlali kwi-CCT Houston.
Iiklasi zenzelwe abafundi besiNgesi kwaye zigxile ukulungiselela abafundi udliwanondlebe, i-English kunye ne-US yeVolics / Imbali ye-US. Ziqhelanise nodliwanondlebe, uvavanyo, kwaye ufunde isiNgesi ekufuneka siphumelele. Abaphumeleleyo abagqibeleleyo bafumana ukufikelela kuncedo lwezomthetho kunye nokumelwa kwenkqubo yabo yokwenziwa kwendalo kumaZiko obuKatolika.
Cela ulwazi oluthe kratya kwiKhosi yokuLungiselela ubuzwe
Nceda chwetheza 2 ukuze sazi ukuba uyinyani
Indawo yokufunda isiNgesi kuLwimi yintsimi yehlabathi jikelele enamathuba okusebenza kunye neenkcubeko ezahlukeneyo ekhaya okanye ukuhamba umhlaba ufundisa kwaye uhlangane nabantu abatsha. Nokuba unomdla wokufundisa ekhaya okanye ukuya kwelinye ilizwe, i-BEI inokukunceda ngoqeqesho olufunekayo ukuze ube nguTitshala oLwimi lwesiNgesi.
Inkqubo yethu yokuQeqesha ukuFundiswa kwabafundisi-ntsapho yenzelwe ukunceda abaviwa ukuba babe ngabafundisi abaphumeleleyo boLwimi lwesiNgesi ngokubonelela:
Iingcebiso ezisisiseko kunye nobuchule bokufundisa ngokuchanekileyo uLwimi lwesiNgesi.
Iindlela zokufundisa ukubandakanya abafundi bayo yonke iminyaka kunye nenqanaba.
Ulawulo lwegumbi lokufundela kunye nezicwangciso zokucwangcisa izifundo kumanqanaba ohlukeneyo.
Iindlela zamva nje kwiindlela ze-EL, ukuFunda ngokuHlangeneyo kunye neendlela zonxibelelwano.
Amava omsebenzi owenziwayo kootitshala abatsha be-EL abanomdla wokufundisa ekhaya nakwamanye amazwe.
Ke ukuba ucinga ngokufunda kwimfundo yolwimi lwesiNgesi, kufuneka ugqibezele umsebenzi wakho, okanye ufuna ukuhamba nokusebenza kwilizwe jikelele, qhakamshelana ne-BEI ukuze uqale umsebenzi wakho we-EL.